Obianọ Enyela Igwe Ojooto Asambodo
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ enyela Igwe Gerald Mbamalụ asambado dịka eze ọdịnala ọhụụ nke obodo Ojooto dị n'okpuru ọchịchị Idemili Sawụtụ nke steeti ahụ.
Ka ọ na-enye ya asambodo ahụ, gọvanọ Obianọ kọwara na gọọmenti ya zọbatara ụkwụ n'okwu gbasaara ịzọ igwe ahụ, iji hụ na e mere ya n'ụzọ ghe anya oghe, ma gwakwa igwe ahụ ka ọ mara na asambodo ahụ na ọchịchị ọhụụ ya ahụ bụ ka o were ya wee kpokọta ụmụafọ obodo ahụ ọnụ n'ụzọ udo. Ọ dụrụ Igwe Mbamalụ ka o were aka ịkwụ ọtọ wee chịa ọchịchị ya iji hụ na o tinyere obodo ahụ n'ezi ọnọdụ udo, ọganihu na ịdị n'otu dịka a tụrụ anya n'aka ezi onye ndu ọbụla.
N'okwu nke ya, kọmishiọna na-ahụ maka ihe gbasaara okpuru ọchịchị na ọchịchị ime ime obodo, bụ Maazị Greg Obi kọwara na gọọmenti steeti ahụ eguzobela nnukwu kọmitii ga-elebà anya n'ihe gbasaasa nsogbu ahụ dapụtara n'obodo ahụ, ma too gọvanọ Willie Obianọ maka otu o si eweta nsogbu ọchịchị dị n'obodo dị iche iche na steeti ahụ n'isi njedobe.
N'akụkụ nke ya, eze ọdịnala Ukwulu, bụ Igwe Peter Ụyanwa dụrụ igwe ọhụụ ahụ ọdụ ka ọ ghara iji asambodo ahụ na ọkwa ọchịchị ya wee megide ndị enyeghị ya nkwàdo n'ịzọ ọkwa ahụ; kama ka ọ na-emeso ha niile dịka nna.
Na nzaghachi, Igwe Mbamalụ kelere ọchịchị steeti Anambra maka inye ya asambodo ahụ, ma kwe nkwa na ọ ga-eji ikwesi ntụkwasị obi wee duo obodo ahụ, ma jirikwa ọkwa ya ahụ wee hazie obodo ahụ na ụmụafọ ya niile nke ọma ka ọ nọrọ n'ọnọdụ e ji ama atụ.